Ciidamada huwanta Amisom oo la wareegey gacan kuheynta deg.yaaqbariweyne ee gobolka shab/hoose. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Wararka Ciidamada huwanta Amisom oo la wareegey gacan kuheynta deg.yaaqbariweyne ee gobolka shab/hoose.
Ciidamada huwanta Amisom oo la wareegey gacan kuheynta deg.yaaqbariweyne ee gobolka shab/hoose.
Waxa ay sheegayaan wararka naga soo gaaraya gob/shabeelada hoose in lagala wareegey gacan ku heynta deg.yaaqbariweyne xarakada alshabaab oo hore u maamuli jirtey inta badan degmooyin ka tirsan gob/shabelada hose.
Xakada alshabaab ayaa ku tilmaamey la wareegida deegaano badan oo lagala wareegey in ay uga baxeen xeelad dagaal guushuna ay iyaga u danbeyndoonta,isla markaana ay joogaan meel kasta oo ay gaalada soo duushey ay leeyihiin waan qabsaney waa sida ay hadalka u yiraahdeene.
Ma ahan markii ugu horeysey ee degmooyin lagala wareego xarkada alshabaab,balse la wareegida yaaqbariweyne ayaa imaneysa markii ay ciidamada huwantu sheegeen in ay la wareegeen garoonka balidoogle oo ah garoon istaraaji u ah ciidamada iyo degmooyinka uu ka koobanyahey gobolka sh/hoose.
Previous articleWakiilkii Al-shabaaab U Qaabilsanaa Gobolka Banaadir Oo Maanta Xilka Laga Qaaday Loona Magacaabay Mid Cusub
Next articleMadaxweynaha xibin iyo xeeb Maxamed aadan tiicey oo maanta warbaahinta la hadley sheegeyna in cabdi qeybdiid dagaalo cusub uu ka hurinayo deegaano nabdoon.